पर्समा सबैले राख्नुपर्ने यी ५ चमत्कारी चिजहरु ! कस्तो हुन्छ फाइदाजनक हेर्नुहोस – Butwal Sandesh
पर्समा सबैले राख्नुपर्ने यी ५ चमत्कारी चिजहरु ! कस्तो हुन्छ फाइदाजनक हेर्नुहोस
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र ? जसको लागि मानिसहरू क*डा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन । तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन ।
समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस । बागलुङ नगरपालिका–१ निरयघाट नजिक खसेको प*हिरोले स्काभेटर, टिपर र ट्रयाक्टर पुरेको छ ।गए राति साढे आठ बजे खसेको पहिरोमा परी टिपर चालक निर्मल पुन र ट्याक्टर चालक रोशन नेपाली बे पत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दीपक रिजालले जानकारी दिए ।
पहिरो गएको केहीबेरमै उ द्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालित भएको थियो । निरन्तर प*हिरो खसिरहेको र जो खिमयुक्त भूगोल भएकाले मध्यरातसम्म उ द्धारको प्रयास गरिए पनि सम्भव हुन सकेको थिएन । सुरक्षाकर्मीले जेनेरेटरबाट बत्ती बालेर रातभर उ द्धारको प्रयास गरेका थिए ।
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:२४